Myanmar – Art Show – Thet Nandar
Category: Myanmar – Art Show
12.1.10 – Art Show Slideshow: Thet’s trip from Bloomfield, Connecticut, United States to Yangon (Rangoon), Myanmar was created by TripAdvisor. See another Yangon (Rangoon) slideshow. Create your own stunning slideshow with our free photo slideshow maker. ပြည်လမ်း၊ အမျိုးသားပြတိုက်မှာ ၁၂.၁.၂၀၁၁ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပန်းချီပြပွဲပါ။ သပွက်အူနဲ့ စိတ်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ ပြကွက်၊ ဂျုံတွေနဲ့ ဒီနေ့ခေတ် လူအဖွဲ့အစည်းကို စိတ်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ ပြကွက်တွေနဲ့အတူ မော်ဒန် စိတ်ကူးတွေကော အများကြီးပါပဲ။ အဲဒီပန်းချီပွဲ သွားတုန်းက သားသား […]
Read More ပန်းချီပြပွဲ